Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) -APICMO Heterocycles
ထုတ်ကုန်များ > Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် Tetrahydro-4-pyranol အမြောက်အမြား (2081-44-9), ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) ကဗီဒီယို
(ဓာတုညီမျှခြင်းပေးအပ်) ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်β-secretase (BACE1) inhibitors ၏ပထမမျိုးဆက်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) ၏ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ကြရပြီ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် selection ၏ alignment ကိုအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ဤနေရာတွင်ကျနော်တို့အစွမ်းထက်, အနိမ့်ရှင်းလင်းရေးတစ်ဝတ္ထုလူတန်းစား, thioamidine 1 ကိုယ်စားပြု CNS ထိုးဖောက်မှု BACE5 inhibitors ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖော်ပြရန်။ နောက်ထပ်ကိုပုဇီဝြဖစ် (> 95percent) ၏မြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းကြောင့်ဒီအင်ဇိုင်းများ၏ polymorphic သဘောသဘာဝဖို့ဆေးခန်းထဲမှာသားကောင်-based မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါး interaction က (DDI) အတွက်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်နှင့် variable ကိုထိတွေ့မှုတိုးမြှင့်, CYP2D6 ကြောင့်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ , အလွှာ / inhibitor ရှုပ်ထွေးသောအကြားစည်းနှောင် mode နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အလွှာ2နှင့်6pyrazole သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ CYP5D6 ရှုပ်ထွေးသော၏ဖြေရှင်းကြည်လင်အဆောက်အဦများအနာဂတ်ဒီဇိုင်းကိုလမ်းညွှန်ရန်။ အဆိုပါ BACE1 နှင့် CYP2D6 ကြည်လင်အဆောက်အဦများအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းပါက DDI အဘို့အလျှော့စွန့်စားမှု, ဗဟိုထိရောက်မှုနှင့်တိုးတက်လာသော hERG ကုထုံးမာဂျင်နှင့်အတူ Analogues ဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD00006633
InChI Key ကို LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 102.133
အရောင် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအရောင်မဲ့-နီးပါးအရောင်မဲ့
ရေဆူမှတ် 190 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) ဆောင်းပါးများ
အလယ်ပိုင်းထိရောက်မှု BACE2 inhibitors တစ် Novell စီးရီးနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး-မူးယစ်ဆေးဆက်သွယ်မှု၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့ CYP6D1 နှင့် BACE1 ရှုပ်ထွေးသော၏ structures များအသုံးချဖို့
(ဓာတုညီမျှခြင်းပေးအပ်) ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်β-secretase (BACE1) inhibitors ၏ပထမမျိုးဆက်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) ၏ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသို့ကြရပြီ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 2015 ၏ဂျာနယ်
အက်တမ်အကျိုးရှိစွာ, အရည်ပျော်ပစ္စည်း-အခမဲ့, အစိမ်းပေါင်းစပ်နှင့် 2-အမိုင်နို-6-methyl-4-aryl-8 ၏ antimycobacterial အကဲဖြတ် - [(E) နဲ့ -arylmethylidene] -5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrano [3,2-က c] pyridine- 3-carbonitriles
တဆယ် 2-အမိုင်နို-6-methyl-4-aryl-8 များ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အက်တမ်အကျိုးရှိစွာ, အစိမ်း protocol ကို - [(E) နဲ့ -arylmethylidene] -5,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrano [3,2-က c] pyridine-3-carbonitriles
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ2ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9)
APICMO မှာကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ် Tetrahydro-4-pyranol ပမာဏ synthesize ။ ဒီထုတ်ကုန် heterocycles, pyrans နှင့်ဆက်စပ်အဆောက်အဦလုပ်ကွက်ကဲ့သို့တူညီသောကဏ္ဍကျရောက်ပါတယ်။
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) ဖျေါပွခကျြ
β-secretase သို့မဟုတ် BACE1 inhibitors ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒီကုထုံးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောစိန်ခေါ်မှုကမူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါး interaction က၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ CYP2D6 ဟာဇီဝြဖစ်၏အကြောင်းကို 95% များအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
β-secretase ၏ထိရောက်သော inhibitors ဒီဇိုင်းတစ်ခုလေလံမှာတော့ BACE1 နှင့် CYP2D6 ၏ကြည်လင်အဆောက်အဦများသုံးသပ်နေကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအတူတကွ pyrazole6သောသက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်နှင့်အတူနှစ်ဦးအဖြည့်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုမူးယစ်ဆေး interaction က၏အနိမ့်အန္တရာယ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် hERG ကုထုံးမာဂျင်နဲ့ inhibitor မှဦးဆောင်
နာမ် · Tetrahydro-2H-pyran-4-ol
· 2H-Pyran-4-ol, tetrahydro-
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအရည်
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 102.068
ခန့်မှန်းအရည်ပျော်မှတ် (C) -24.06
Flash ကိုအမှတ် (C) 88
IUPAC name ကို Oxan-4-ol
သိပ်သည်းဆ (ဆ / mL) 1.071 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 25
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 2081-44-9
ကြွက်ကြွက်ဆူပွိုင့် (C) 190
Tetrahydro-4-pyranol: ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင် - 1 ယူနစ်
လက်ခံသူ -2ယူနစ်
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9): အသွင်အပြင်
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) တွက်ချက် Properties ကို
XLogP3-AA ကို -0.1
အခိုးအငွေ့ဖိအား (mmHg) 0.23
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 29.5 တစ် ^ 2
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 7
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 102.068
အခိုးအငွေ့၏ Enthalpy (ကီလိုဂျိုး / mol) 48.8
Tetrahydro-15-pyranol များအတွက်4ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိပါတယ်။ အောက်ကထုတ်ကုန် synthesizing ၏အပေါ်ဆုံးသုံးခုရှိပါတယ်, ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်းအများဆုံးအကြံပြုသည်:
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) Applications ကို
ရှူရှိုက်မိခြင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယားယံ, ပျို့, အသက်ရှုကြပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးဝြေခင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ
Tetrahydro-4-pyranol နှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်မှကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်။ မျက်နှာမျက်နှာဖုံး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်နှင့် Air-စင်ကြယ်စေ filter များတပ်ဆင်ထားအသက်ရှူကိရိယာကိုသုံးပါ။ အသားအရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့, မိုးသည်းထန်စွာရော်ဘာဖိနပ်နှင့်ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်အပါအဝင်အပြည့်အဝဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်။
2 ။ Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုအငွေ့ပါးပျဉ်း, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, ပရိသတ်တွေ, လေသန့်ရှင်းရေးကိရိယာမီးသတ်ဘူးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရေချိုးခန်းတပ်ဆင်ထားသည်အာမခံပါသည်။
အကြောင်းကို 15 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေး၏ပဒေသာနှင့်အတူမျက်စိလက်မဆေးမတိုင်မီအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဖယ်ရှားပါ။
ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်ဧရိယာမှသားကောင်ရွှေ့ပါ။ အသက်ရှူအခက်အခဲများ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အတုအသက်ရှူစီမံခန့်ခွဲ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်လက်ရှိပါလျှင်နောက်ထပ်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုရှာကြလော့။
မည်သည့်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားဖယ်ရှားပါ။ ရေနှင့် Non-ပွန်းဆပ်ပြာ running ၏ copious ပမာဏနှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဆေးကြောပါ။ အနည်းဆုံးအား 15 မိနစ်ပွဲချင်းပြီးလက်မဆေး Continue ။
နေဆဲသတိရှိလျှင်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှုတ်တော်ထွက်ကိုလျှော်သို့မဟုတ်တစ်ဝက်တစ်လီတာရေပမာဏ၏ပဒေသာကိုသောက်လော့။ အမှု၌ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်လက္ခဏာများဆက်လက်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်သားကောင်သတိလစ်ဖြစ်လာသည်။
4 ။ Tetrahydro-4-pyranol အသုံးပြုခြင်းလိုက်တဲ့အခါ
အသက်ရှူဖုန်မှုန့်, အခိုးအငွေ့, အငွေ့, သို့မဟုတ်အခြားထုတ်လွှတ်မှုရှောင်ကြဉ်ပါ
အကာအကွယ်မကျြစိကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဂီယာ, မျက်နှာ, တစ်ခုလုံးခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ဆင်
Tetrahydro-4-pyranol အသုံးပြုမှုထဲမှာမဖြစ်တဲ့အခါ, အောက်ကဝင်ရောက်ခဲ့သည်အချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစား:
တစ်ဦးအေးမြခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် Store က
7 ။ Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
အနိမ့်သောအပူချိန်အောက်မှာ Store က
8 ။ Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
အဆိပ်အပြင်းအငွေ့သို့မဟုတ်အငွေ့၏မွှန်တားဆီးဖို့မီးလျှံထွက်ချပြီးသည့်အခါအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်။ ရှိုက်သောအခါလောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်အဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မီးငြိမ်းအေးစေရန်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, အမြှုပ်, ဒါမှမဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်ကိုသုံးပါ။
အဆိုပါယိုဖိတ်မှုဖွင့်ကောက်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒါပြာမှုန်များအဖြစ်အာဂွန်စုပ်ကိုသုံးပါ။ စွန့်ပစ်ဘို့ကထုတ်မီတတံခါးပိတ်နှင့်တံဆိပ်ကပ်ကွန်တိန်နာအတွင်းအကြွင်းအကျန်ပစ်။ ထိုဒေသတွင်ကို clean up နှင့်ကလေခတ်။
9 ။ Tetrahydro-4-pyranol တည်ငြိမ်ရေးနှင့် reactivity
Tetrahydro-4-pyranol ရေထဲမှာပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်, အပူ, မီးတောက်, ဒါမှမဟုတ်မီးစများ၌၎င်းနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါပြိုကွဲလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သူကအားကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များ, အက်ဆစ် anhydrides နှင့်အက်ဆစ် chloride အောက်မှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းနှုန်းအဖြစ် Tetrahydro-4-pyranol များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ တနည်းအားဖြင့်သင်တစ်ဦး afterburner နှင့် scrubber သည့်ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။
11 ။ (2081-44-9) သင်္ဘောအင်ဖို
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) စည်းမျဉ်းအင်ဖို
Tetrahydro-4-pyranol တံခါးခုံအဆင့် Sara ခေါင်းစဉ် III ကို, အပိုင်း 302 နှင့် 313 ၏လိုအပ်ချက်များကိုအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လုံခြုံမှုအစီအမံအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များမ EC အစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ complies ဖော်ပြထား။ 1907 / 2006 ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန, ဓာတုပေါင်းစပ်, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography နှင့် analytical လယ်ပြင်၌ကြုံတွေ့နေကြသည်။
Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း
သင်သည်သင်၏သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, ပေါင်းစပ်ခြင်း, အခြား application များအတွက် Tetrahydro-4-pyranol အမြောက်အမြားလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အမိန့်ထားပါ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ အမျိုးသားဆေးပညာ၏စာကြည့်တိုက်, Pubchem, Tetrahydro-4-pyranol (2081-44-9) ကဏ္ဍများ 1-8
ဂျက်ကီချန်း, AW, et al .: ဂျေ Med ။ Chem, 53, 3086 (2010) ။ ; Desjardins, AE ။ ။ et al .: Phytochem, 27, 767 (1988);
ဒါဝိဒ်သည် R. Lide, စီအာစီနှိပ်ပါ။ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ, စာမျက်နှာ 1995-234 ၏, 278, အမည်များဖြင့် synonym တွေဟာနှင့်အဆောက်အဦများ။
အကောင်းဆုံး Tetrahydro-4-pyranol နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့တယ်, Nice အတွေ့အကြုံကို